Indlela yokutshintshela amanqaku ahlukeneyo evela ku-Evernote ukuya kuScrivener
Imbali kunye neNkcubeko Ulwalamano
Hudula kwaye ulahle amanqaku ngamnye ukusuka ku-Evernote ukuya kuScrivener. UKimberly T. Powell
Kubabonke abalobi banjengaye mna abangenakuhlala ngaphandle kweScrivener , kodwa nabo banomlutha ku-Evernote ngenxa yokukwazi ukwenza konke ophando lwakho kunye ngendlela ehleliweyo, ukukwazi ukusebenzisa iiprogram ezimbini ngokubambisana ukuphonsa okwenene 1-2 i-punch! Ngoxa i-Evernote ne-Scrivener engavumelani ngokuthe ngqo kunye nomnye, kukho iindlela ezininzi ezahlukahlukeneyo ukuba amanqaku akho avela ku-Evernote angabandakanywa lula ngokukodwa kwiprojekthi yeScrivener.
Isistim esisodwa (ukungenisa inqaku njengenguqu egciniweyo):
Vula kwaye ungene kwi- app ye - Evernote yeWebhu . Khangela inqaku lomdla usebenzisa ukukhetha kwakho uphendlo, uphendlo, amathegi, uludwe lweencwadana, njl. Khangela isixhumanisi se-URL kwikhasi lephepha ngalinye uze udibanise uze usibeke kule Scrivener. Oku kuzisa iphepha lewebhu okanye uqaphele kwiScrivener njengekopi engovimba. Oku kuyona nto ingcono kuwe ukuba ukuba ungenise amanqaku akho kwi-Scrivener, unqwenela ukususa e-Evernote.
Qaphela: Lo mfanekiso weskrini ubonisa uluhlu lwoluhlu . Kwimiboniso yeepaneli zephaneli ezintathu, ikhonkco le-URL liya kufumaneka kwikona eliphezulu lasekunene lesithathu kwipaneli yamanqaku. Khetha "iindlela zokujonga" ukutshintsha phakathi kwembono ezimbini kwi-Evernote.
Indlela yesibini (ukungenisa inqaku njengenombolo ye-intanethi yangaphandle):
Khetha inketho "Yabelana" ngaphezu kwe-URL uze ukhethe "isixhumanisi" kwimenyu ehlayo. Kwibhokisi ekhupha phezulu, khetha "Khuphela kwiBhodi yokuCwangcisa." Emva koko kwi-Scrivener, nqakraza ngakwesokudla kwifolda apho ufuna ukufaka inkcazo yangaphandle kwaye ukhethe "Yongeza" kwaye "IWebhu Page." Iwindow ene popup iya kuba ne-URL yangaphambi kwendawo ukusuka kwi-Clipboard-yongeza nje isihloko kwaye ulungele ukuya. Oku kuza kuzisa iphepha lewebhu elibukhoma kwiprojekti yakho yeScrivener, kunokuba iguqulelwe ingxelo.
Indlela yokuThathu (ukungenisa inqaku njengokubhekisela kwangaphandle ku-Evernote):
Ukuba unqwenela ukuba inkcazo yangaphandle ivule inqaku lakho kwiprogram ye-Evernote endaweni yesiphequluli sewebhu, qalisa ukufumana inqaku kwiprogram yakho ye-Evernote. Ngokuqhelekileyo, ukuchofoza ngokuchanekileyo kwiphepha kuletha imenyu equka ukhetho "Khuphela Ikhonkco leNqaku." Kunoko, yongeza ukhetho olukhetho njengoko ucofa ngokuchanekileyo (Ulawulo> Inketho> Cofa kwi-Mac okanye Cofa lasekunene> Ikhompyutheni kwi-PC) ukukhupha imenyu yokunqakraza kwaye ukhethe "Khuphela Ikhonkco yeClass Classic."
Emva koko, vula iphaneli yokubhekisela kwipaneli yoMhloli (khetha uphawu olubukeka njenge-stack yeencwadi phantsi kwefestile yoMhloli ukuvula le khowudi). Cofa kwi-icon + ukuze ungeze isalathisi esitsha, wongeza isihloko kwaye unamathisele kwisikhonkco oshicilelwe kwinqanaba langaphambili. Unokwenza emva koko uvula le ncwadana ngqo kwiprogram yakho ye-Evernote ngasiphi na ixesha ngokuchofoza kabini uphawu lwekhasi ngaphaya kwereferensi.
Indlela yokuzisa i-Evernote Notebooks kwiProjekthi Yakho yokubhala
Indlela yokuthumela ii-Evernote Notebook kwiScrivener. UKimberly T. Powell
Inyathelo lokuqala: Kuhlelo lwe-Evernote yeWebhu, vula uluhlu lweencwadi. Cofa iqhosha kwi-notebook ofuna ukuyithumela kwi-Scrivener, kwaye ukhethe "yabelana ngale ncwadana."
Inyathelo Elibini: Iwindow ekhuphayo iya kuvela ekunika ukhetho "ukwabelana" okanye "ukushicilela" incwadana yakho. Khetha inketho "yokushicilela".
Inyathelo lesithathu: Iwindow ebonakalayo ibonakala. Phezulu kwile festile yi-URL yesiXhobo se-URL. Cofa uze udibanise le nxu lumene kwiCandelo loPhando lweScrivener (mhlawumbi ngokwalo okanye ngaphakathi kwifolda). Oku kukunika ufikelelo olupheleleyo kwi "Evernote Shared Notebook" yakho ngaphakathi kwiprojekthi yakho yeScrivener.
Ixesha loPhando loLuntu
IiNdaba zoLuntu zoBugama omele ufunde
Iincwadi eziPhambili zeFiction kwi-Genealogy Lovers
I-10 Imele-Yabona Iimviezo Ngezobuqili kunye neeWebhu
Inkcazo yoKukholelwa kobuthixo
5 Iimoto ezifakwe kwiiKhishini onokuzifuna kodwa awukwazi ukuzithenga eMelika